Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Curtis Jones hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Ezigbo akụkọ ndụ
Anyị Curtis Jones Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, arsgbọ ala, Net Worth, Web na Life Life.
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị ọkachamara n'asụsụ Bekee, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ ụlọ ọrụ ya - nchịkọta zuru oke nke Lee Kang-in's Bio.
Ndụ dị jụụ nke Curtis Jones anyị kpebiri na ị maghị.
Ee, onye ọ bụla maara onye egwuregwu na ezinụlọ sitere na Toxeth (South nke Liverpool City Center) Ezuru ihe nkiri ahụ ọtụtụ oge maka klọb ya.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Curtis Jones 'Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Curtis Jones Childhoodmụaka - Nzụlite Ezinụlọ na Ndụ Mbido:
Maka Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu aha ya bụ “Ckwà mgbochi Iron". Curtis Julian Jones a mụrụ na 30th ụbọchị nke Jenụwarị 2001 na Liverpool na England.
Ọ bụ ọdụdụ nwa n'ime ụmụ anọ nne ya mụrụ, Sandra na nna ya obere amaara.
Nke a bụ foto nke otu nne na nna Curtis Jones.
Mba Bekee nke agbụrụ dị iche iche na-amachaghị ezinụlọ sitere na Toxeth - nke dị na ndịda Liverpool - n'etiti ebe o toro na ụmụnne ya ndị obere atọ amatabeghị.
N'ịbụ onye na-etolite n'ezinụlọ nke dị n'etiti na Toxteth, nwa okorobịa bụ Jones bụ onye na-anụ ọkụ n'egwuregwu bọọlụ na nwata n'okporo ámá bụ onye ndụ nwata ya na-agba bọl yana ịme ihe kachasị mma n'oge ọ bụla ha bịara.
“Etoro m ụzọ ọtụtụ ndị Scousers (ndị si Liverpool) mere. Naanị ịbụ nwata n'okporo ámá na nrọ nrọ.
Ọ bụ ezie na enweghị ụlọ ọrụ kachasị mma iji kwado nrọ m na nke ndị ọgbọ m, enwere nhọrọ nke ị nweta ihe kachasị mma anyị nwere ike ịtụkwasị aka ”.
Cheta Jones mgbe ọ dị obere.
Curtis Jones Mmụta na Ọrụ Buildup:
Na-ekwu maka ịme ihe kachasị na ihe niile, enwere ụlọ akwụkwọ praịmarị na elu nke okporo ụzọ Jones nke nwere ebe egwuregwu zuru oke zuru oke. Ọ nwekwara ezigbo ọkụ nke nwere ike ịkwado egwuregwu abalị.
Jones na ndị ọgbọ ya na-arịkarị mgbidi ụlọ akwụkwọ iji kpọọ egwu na abalị. N’abalị ndị ọzọ, ha ga-ebinye otu n’ime ụlọ akwụkwọ ha nwere ike ibugharị ma chọọ igwu egwu n’okporo ụzọ abalị niile.
Little Curtis na ndị ọgbọ ya na-egwu bọl n'okporo ámá site na iji ihe mgbaru ọsọ a gbaziri agbazinye.
Ndụ Curtis Jones Early Career:
Ka ọ na-erule oge Jones dị afọ 9, ọ nwetala ọnọdụ na ụlọ akwụkwọ ntorobịa Liverpool na enweghị ihe ọzọ ịdabere na ịwụ elu n'obere ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ịgbaziri ihe mgbaru ọsọ iji nweta mmetụta nke ịgba bọl asọmpi.
N'ime afọ ndị sochirinụ, nwa okorobịa bụ Jones dere ọmarịcha mmụba site na agụmakwụkwọ, wee bụrụ onye ama ama mgbe ọ malitere igosi Liverpool 18s naanị mgbe ọ dị afọ 15!
Foto a na - adịghị ahụkebe nke Curtis Jones ọnwa ole na ole ọ ghọrọ kpakpando na 15.
Curtis Jones Biography Eziokwu - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'oge na-adịghị anya, nkà Jones na ntụkwasị obi ghọrọ akara ụghalaahia ya nke na ọ malitere igosi egwuregwu U23 mgbe ọ dị afọ 16.
Site na ịrị elu meteoric dị otú ahụ, Jones mara ikpe nke ịkọwapụta bọọlụ na ịkọwapụta talent ya n'ụzọ na-enweghị isi mgbe ọ bụla ọ laghachitere na ọgbọ nke ya.
Site na njikwa nke onye nchịkwa Jones U18 na arụsị ụmụaka Steven Gerrard, a manyere ya ịmụta ijide onwe ya ma nụchaa ya ka ọ bụrụ naanị ezigbo onye maara egwuregwu bọọlụ.
Mgbe ahụ, Manchester City na Manchester United na-achọ inweta mbinye aka ya mana Jones họọrọ ịnọgide na ndị na-acha uhie uhie.
"N'ịbụ nwa nwoke mpaghara, naanị m nwere otu ọchịchọ, ịnọchite anya Liverpool ma gosipụta ihe ụmụ nwoke obodo nwere ike".
Kpughere Jones banyere mkpebi o kpebiri ịnọgide Liverpool.
The Rising Star bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Liverpool mgbe ọ jụchara onyinye sitere na Manchester United na Manchester City.
Curtis Jones Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Obi abụọ adịghị ya na Liverpool nwere okwukwe na uto Jones na atụmanya maka ihe ndị ka ukwuu. N'ezie, Steven Gerrard wuru ndi otu U18 gburugburu ya n'ihi na nwata ahu nwere ikike imeputa ihe site na ihe efu.
Mgbe oge ruru, Jones mere ndị otu egwuregwu mbụ ya na 7th nke Jenụwarị 2019 n'oge FA Cup nke atọ megide Wolverhampton Wanderers.
Onye egwu ahụ dị egwu wee pụta dị ka Player of the Match mgbe EFL Cup egwuregwu megide Milton Keynes Dons na Septemba 2019.
Nwa-nwoke a siri ike ileghara anya mgbe o meriri ntaramahụhụ mmeri na Liverpool nke EFL Cup mmeri megide Arsenal na Disemba 2019.
N'ihe dị ka ụbọchị 32 ka e mesịrị, Jones ghọrọ onye a na-apụghị ịgbagha agbagha mgbe mgbagharị ya si na yad 20 hụrụ azụ nke ụgbụ iji nyere aka n'akụkụ ya merie Everton 1-0 na iko FA na Anfield.
Curtis Jones mgbaru ọsọ dị egwu megide Everton meriri obi ya na nke ndị otu egwuregwu. Ndị egwuregwu na ndị na-emegide ya masịrị ya.
Curtis Jones Mmekọrịta Ndụ Eziokwu:
Know maara na Curtis Jones so na klaasị ndị egwuregwu bọọlụ bụ ndị mmeri ma ha abụrụ ma ọ bụ n'ọdụ egwuregwu ahụ. Mbanye n'ime ndụ ịhụnanya ya ga-eme ka ị kwenye.
Amabeghị ihe banyere enyi nwanyị Curtis Jones tupu Disemba 2019. N'ezie, ọnọdụ mmekọrịta Jones bụ okwu nke ịkọ nkọ rue mgbe o tinyere foto ya na enyi ya nwanyị na twitter.
Ego ole ka masịrị Curtis Jones enyi nwanyị dị ka a hụrụ na foto a?
N'ịgbaso twitter post, Jones - onye na-enweghị nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị (n'alụghị di) kwenyere na ọ ga-eme atụmatụ banyere ọdịnihu ya na obere enyi ya nwanyị a ma ama.
Fans na-akwado nkwado nke lovebirds 'mmekọrịta na cant chere ịhụ ha ịghọ di na nwunye.
Ndụ Curtis Jones Ezinụlọ:
Ọ na-ewe ndị nne na nna na ụmụ nwanne na-akwado ịzụlite kpakpando dị ka Jones. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ndị otu Curtis Jones sitere na nne na nna ya.
Banyere nna na nne Curtis Jones: Iji bido na ndị nne na nna Curtis Jones, a ka ga-eme ka papa ya mara n'oge ederede.
Otú ọ dị, a matawo mama onye ọkpụkpọ dị ka Sandra. Ọ na-esokarị Jones ọzụzụ n'oge ọrụ ya na Liverpool ma mgbe ụfọdụ, ọ na-eguzo na oyi na-atụ iji bulie ya mgbe ọzụzụ gasịrị. Ọ na-aga n'ekwughị na Sandra nwere ezigbo mmekọrịta ya na nwa ya nwoke nke ọdụdụ.
Zute Curtis Jones nne Sandra onye hụrụ n'anya soro ya gaa ọzụzụ kemgbe oge.
Banyere ụmụnne na ndị ikwu Curtis Jones: Curtis Jones tolitere na mmadụ atọ amatabeghị nwanne. Ka o siri dị, amabeghị ma ụmụnne ahụ bụ ndị nwoke na nwanne nwanyị jikọtara ọnụ maọbụ na o nwere nwoke.
N'otu aka ahụ, amabeghị ọtụtụ ihe gbasara mgbọrọgwụ ezinụlọ Jones ma ọ bụ nna nna ya, ọkachasị nne na nna ya na nna nna ya mgbe amabeghị nwanne nne nwanne papa ya, nwanne nne ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya n'oge edere akụkọ ndụ a.
Curtis Jones Ndụ Nke Onwe:
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na Curtis Jones nwere ọmarịcha anya ụlọikpe ahụ. Agbanyeghị, ọ bụ ụdị onye ọ bụ bụ ihe na-ejide obi onye ọ bụla zutere ya. Àgwà nke Jones 'maa mma persona kọwaa site Aquarius zodiac ịrịba ama.
Ha gụnyere asọmpi ya, obi ike ya, agwa ya na enweghị ike igosipụta ọtụtụ ihe gbasara ndụ onwe ya. Ihe ndị na-amasị ya na ihe omume ntụrụndụ ya gụnyere nri, ige egwu na iso ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya nọrịa.
Curtis Jones hụrụ nri n'anya. A na-ese ya na Naby Keita.
Eziokwu Curtis Jones Ndụ:
Banyere otu Curtis Jones si eme ma na-emefu ego ya, ọnụ ahịa ya ka na-enyocha n'oge edere mgbe uru ahịa ya dị na € 2 nde. Enweghị ekele ọ bụla maka afọ ole na ole o nwetara na-egwu egwuregwu bọl-elu.
A na-enyocha ọnụ ụgbụ ngwa ngwa nke kpakpando a na-ede n'oge a.
Dị ka ndị dị otú a, onye na-eto eto na-eto eto - onye ga-eme ememme ncheta afọ nke 19 ya na 30th nke Jenụwarị 2020 - enweghị ike ibi ndụ okomoko nke ndị na-emefu nnukwu ego na ụgbọ ala na ụlọ iji gosipụta.
Ndị ezinụlọ Curtis Jones ọkachasị ndị mụrụ ya enyela ya ndụmọdụ ọtụtụ oge na mkpa ọ dị ịnọ ọdụ mgbe niile.
Curtis Jones Eziokwu Eziokwu:
Tupu anyị akpọọ ya ihe mkpuchi na akụkọ Curtis Jones na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ akụkọ amachaghị ma ọ bụ akụkọ a na-akọ banyere onye ọkpọ egwuregwu.
IKPE: Jones abụghị nnukwu na okpukpe n'ihi na ọ naghị enye echiche nke ịbụ onye okpukpe n'oge ajụjụ ọnụ ma ọ bụ ememe mgbaru ọsọ n'oge ederede.
Agbanyeghị, anyị chere na ndị nne na nna Curtis Jones zụlitere ya ịgbaso na ikpe okpukpe Ndị Kraịst. N'ihi ya, nsogbu ndị ahụ na-amasị ya ịbụ Onye Kraịst.
TATTOOS: Onye Midchester enweghị egbugbu n'oge ederede. Agbanyeghị, ọ nwere ike nweta mmegharị ahụ n'ọdịnihu. Ka ọ dị mgbe ahụ, Jones guzo ọtọ dịka ekere ya n’ogologo 6 inch 1 inch.
Curtis Jones enweghị akara aka na aka ya ma ọ bụ ụkwụ ya n'oge a na-ede akụkọ ndụ a.
SM SMụ sịga na ị DRụ mmanya: Onye egwu bọọlụ bụ otu n'ime ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ na-adịghị a smokeụ sịga ma na-a drinkụ n'oge ede. Ebumnuche, ihe kpatara Jones ji họrọ ụdị ahụike dị mma bụ ijide n'aka na ahụ ya ga-anọ n'ọnọdụ zuru oke iji lebara ihe ndị football chọrọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ anyị Curtis Jones Akụkọ banyere nwata, gbakwunyere ihe ndị ọzọ gbasara akụkọ ndụ ha. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
M B BR MAT KWESESTR WITH KWURU NA NNA Ya, Onye NA-EWERE Ọ B S NA Ọ D S MMA, M NA-EZE EZIN MYLỌ M NILE